Vao manomboka ny taom-pianarana dia raikitra sahady ihany koa ny fifamonoana eo anivon'ny ireo andian-jatovo ao Sambava, maka tahaka ny fihetsika mahery vaika ataon’ny «Foroches» any Antsiranana.
Androany alakamisy hariva, avy nirava mpianatra tokony tamin'ny 5 ora sy sasany teo, dia raikitra ny tora-bato sy tifitra flesy efa novatsiana tany anaty kitapo nifanaovna andiana mpianatra, ka ny avy ao Antanifotsy nifampitana tamin'ny mpianatra avy ao Antaimby (Atsimo sy Avaratra).
Vokany, tovolahy kely 12 taona, kilasy «5ème» amin’ny CEG Antanifotsy no naratra vaky loha. Nitsoaka ireo nandratra taorian’izay. Ny hariva teo ihany dia nentin’ny ray aman-dreniny namonjy ny hopitaly be na CHRR Besopaka ilay zaza, notsaboina.
Sarotiny ary nanambara fa tsy hitsitsy amin’ny tranga toy niseho tao Antanifotsy ity ny mpitondra ao Sambava. Milaza ny hitondra ny raharaha eo anivon’ny mpitandro ny filaminana rahateo ny ray amandrenin’ny zaza naratra rehefa nahazo fitsaboana sahaza ity farany. Tadidin’ilay naratra rahateo ny nitoraka azy.